Tungamira kururamisa zvinyora zvezviri mukati me World March
musha » Tungamira kururamisa zvinyora zvezviri mukati me World March
1 Zvinyorwa Zvinyorwa zveNews Releases, News, Press Releases
1.2 Keyword for content writing
1.2.1 Nzira yekuziva sei kana shoko guru rinowanzo tsvaga?
1.3 Mazita uye Mazita Okuremekedza
1.4 Zvisungo kune mamwe mawebsite
1.6 Youtube mavhidhiyo
1.7 Mashoko ekupedzisira
Zvinyorwa Zvinyorwa zveNews Releases, News, Press Releases
Mutsara unofanirwa kuva nehuwandu hunogona kuenzaniswa, kureva kuti, izvi zvinofanira kunge zviri nyore pane zvekugadzirwa kwezvinhu. Iko kuti, usashandise masheji ezvinyorwa zvakasiyana. Shandisa chete zvinyorwa zvisiri zvinyorwa.
Chinhu chakanaka ndechekuti mutsara chete unobereka:
Bold: kuisa pfungwa dzinokosha
Cursive: zvakanyanya kudiwa, pamusangano kana kuti mumumwe mutauro.
Lists: vanogona kuverengwa kana kuti vasina kuverengwa. Tsanangudzo dzakanyora, ine nhamba kana nhamba kubva ku1 kuenda mberi.
Kudzivisa: underlines, mavara mavara, nezvimwe ...
Kana zvinyorwa zvanyorwa muShoko kana muGoogle Docs, zvakakosha kuzvishandura ku HTML maitiro asati aisa kuwebhu. Nokuda kweizvi unofanira kushandisa shanduro yakaita seiyi: https://word2cleanhtml.com. Inoshandisa zvinyorwa zvose muShoko kana Google Docs, uye inodzorera zvinyorwa mu HTML. Zvadaro iyo HTML yanyorwa ichinyorwa mu WordPress HTML editor tab:
Keyword for content writing
Izvi zvingangodaro zvakaoma kupfuura zvese zvevatungamiri content writingNdokusaka ndiri kuenda kunopemha chimwe chinhu chakakosha sezvazvinogona uye kuti zviitwe nepamunogona napo. Iro izwi rinokosha rizere pakati pe2 ne5 mazwi anoshamisa kwazvo uye anodzokororwa akawanda muchinyorwa. Muenzaniso: kana chinyorwa chataura nezve "hutani hwevanhu muLa Coruña"Ipapo Iri rakagadzirwa nemashoko e5 anogona kunyatsosarudzwa kwezwi rinokosha remashoko acho. Muchokwadi kuti "ketani yevanhu" inogona kukwana mumuenzaniso uyu. Kazhinji, chakanakira ndechekuti izwi repakiyi ive chimwe chinhu chinowanzo tsvakwa nevanhu paGoogle.
Nzira yekuziva sei kana shoko guru rinowanzo tsvaga?
Shandisai Word Tracker tool: https://www.wordtracker.com/search (inofanira kuiswa muTeritory, Spain) Nekuva nezvawanikwa, iko kuongororwa gumi, zvakwana. Uye kushandisa izwi risinganzwisisike, semuenzaniso: "rugare". Kana iwe usingakwanise kushandisa Wordtracker nekuti wapfuura muganho wekutsvaga, unogona zvakare kuedza Übersuggest.
Nechepfungwa, inofanirwa kunge iine mhedzisiro, asi yakaipa mibairo, pakati pegumi ne10 inogona kunge yakanaka. Semuenzaniso: "nyika kufora" yakakwanira, haina kunyanyisa kunaka nekuti inongova negumi, asi inokwana:
Kune rimwe divi, "rugare", "rudo", ... rwakaipa kwazvo nekuti vane huwandu hwakanyanya, zvakanaka kupfuura 500:
Ndinoziva kuti dzimwe nguva zvakaoma zvikuru kuwana izwi rinoenderana nemitemo iyi. Kana iwe usingawani chimwe chinokodzera, hapana chinoitika.
Chinangwa ndechokuisa shoko iri kunyanya 2 nguva mundima pasina kuverenga misoro, kana zvimwe zvikamu zvandichazopindura pasi apa. Chimwe chezvinyorwa zveizwi rinokosha, inofanira kuva yakashinga.
Mazita uye Mazita Okuremekedza
Nyaya huru (iyo inowanikwa mubhokisi riri pamusoro) inofanira kuva pakati pe50 uye 75. Uye iwe unofanira kusanganisira shoko rinokosha. Ndicho chikonzero kazhinji kacho pfungwa yakanaka yekusarudza izwi rinokosha, kutarisa musoro
Zvakakosha kuti zvinyorwa zvine zvinyorwa zvinyorwa, kana imwe tsananguro yezinga re 2 (2 Title muShoko). Zvakakodzera, iwe unofanirwa kuva ne 1 kana huwandu hwe2 uye neZ3.
Uyewo Inokurudzirwa isa Subtitle muchikamu chiri pazasi Musoro mukuru uyo ​​unoti "Enter subtitle apa".
Simba re subtitle rinogona kuva rakakura, zvakakodzera kuti riine 121 uye 156 vanhu, nokuti iri kushandisa Meta tsanangudzo. Uyewo, inofanirawo kusanganisira shoko guru.
Chekupedzisira, inofanirwa kutariswa kuti mubati 3 (H3) anofanirwa kunge aine H2 pamusoro uye panofanirwa kuve neanobata mubati mumwe H1 kuti agare achipa hutongi uhu. H2> H2> H3.
Naizvozvo, kana tikatarisa kurongeka kwevabambi kana semuenzaniso tine iwo matatu mairairo
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Zvinenge zvisizvo nekuti H4 nguva dzose inofanirwa kutangirwa neH3
H3 - H2: Zvinenge zvisizvo, nekuti H3 nguva dzose inofanirwa kutangirwa neH2
H3 - H3 - H3: Zvinenge zvakashata nekuti panofanirwa kuve neinenge imwe chete H2
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Izvo zvingave zvakanaka nekuti iyo hierarchical order inoremekedzwa.
Pakupedzisira, shoko guru rinofanira kuenda, mune 1 yezvinyorwa zvinyorwa (hazvina basa kana iri muIndaneti 2 kana Title 3).
Zvisungo kune mamwe mawebsite
Edza kusashandisa zvinyorwa zvakabuda, kunze kwe2 pamagwaro maximum, kunyange zviri nani 1 chete.
Kunze kwekuti iri kunze kwekubatana nepeji ine mukurumbira wakawanda ** , Wikipedia type, pepanhau rakasimba kana chimwe chinhu chakadaro, kuisa muchibatanidzwa se NOFOLLOW pane zvaungasarudza:
Zvakakosha kuti nyaya imwe neimwe ibatane pane imwe nzvimbo kune imwe nzvimbo yewebhu. Kana iyo isingaitiki, iwe unogona kugara uchienda kune peji peji.
Semuenzaniso: "Pakupedzisira World March, takakwanisa kuenda… ”
Muchikamu chekati, usaisa NOFOLLOW.
** Kana iwe usingazivi kana une mbiri yakawanda kana kwete, pinda https://www.alexa.com/siteinfo uye isa iyo URL yesizinda, semuenzaniso "nhasi.es".
Kana iwe uri pasi pe 100.000 mu Global Rank, saka haufaniri kuisa NOFOLLOW. Asi kana iri pamusoro, hongu iwe unoda kuzviisa.
Usati waisa mufananidzo unongoramba uchiyeuka zvinhu izvi:
Iro zita remufananidzo rinofanirwa kuve nyore, pasina “ñ” (chinja iyo ñ for n), isina masisitimu, uye kana paine nzvimbo, shandura ivo ne hyphens.
Kana uchiisa chifananidzo chacho, unofanira kuzadza Chinyorwa, Zvimwe Zvinyorwa uye Zvitsanangudzo. Iwe unogona kuisa zvakafanana mune zvikamu zvitatu.
Hapana mifananidzo inofanira kudarika 1000 px muhupamhi.
Uyewo Zvakakosha kuisa Featured Image. Kana iwe ukaisa mufananidzo mumutsara, usashandise mufananidzo wakafanana seSeti Image. Zvinoshandiswa kuti hapana mufananidzo mune zvinyorwa, kuti hapana chimiro chinoshamisa. Muchikamu, Mamwe mavara uye Tsanangudzo ye Featured Image, zvakakosha kuisa shoko guru.
Chimiro chakanaka cheChitsuwa cheSvondo ndechekuti 960 X 540 kana zvimwe zvikamu zve 16: 9. Iyo yakafara yechifananidzo inofanira kuva pakati pe600px uye 1200px muhupamhi.
Shandisa iyi shortcode:
[su_youtube_dvanced url = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "hongu" https = "hongu"]
Kungoshandura iyo URL, neinoenderana.
Sezvo chiri chokwadi chinonakidza, chinyorwa ichi chinozadzisa zvese zvinodikanwa zvekunyorwa kwezviri mukati mandiri ndakataura pano iko kusanganisira zvinotendwa nekutsvaga:
Pano ndakagadzirira PDF inoshandiswa pamwe chete nezvose zvinokosha kuti usakanganwa chero.